मानिसहरूले एसीको आनन्द नलिऊन् भनेर नि । - साप्ताहिक
रामलाई उसको साथीले सोध्यो, तिमीलाई थाहा छ, एसी चलाउँदा ढोकाहरू किन बन्द गरिन्छ ?
राम : किन थाहा नहुनु, बाहिरका मानिसहरूले एसीको आनन्द नलिऊन् भनेर नि ।
एउटा गाउँको बूढोलाई इंग्लिसको तीन अक्षरमात्र आउँदो रहेछ, एस, नो र थ्याङ्स, यति मात्र जाने पनि बूढो इंग्लिस आउने भनेर खुब घमन्ड गर्दो रहेछ । सबैलाई भन्दै हिँड्दो रहेछ, मलाई इंग्लिस आउछ भनेर । एक समय यस्तो आयो, बूढाको छिमेकमै एउटा मानिसको हत्या भयो । पुलिस आएर छानबिन गर्न थाल्यो । पुलिसले बूढालाई हपार्दै सोध्यो ।
पुलिस : यो हत्या तैँले गर्‍या होस् ?
बूढो : एस
पुलिस : त्यसो भए हिँड जेलमा
बूढो : नो
पुलिसले जेल हालेपछि
बूढो : थ्याङ्स
जेलमा परिसकेपछि बूढोले मनमनै सोच्यो, आम्मै ! मैले त तीन अक्षर मात्र इंग्लिस जानेको थिएँ, जेल हाले यिनीहरूले, पूरै इंग्लिस जान्नेलाई त फाँसीमै चढाउँछन् कि क्या हो ?
बाउ : तँ म्याथमा किन फेल भइस शेरे ?
शेरे : टिचरले भन्छ, ३+५≠८
अर्को दिन भन्छ, ४+४≠८
फेरि अर्को दिन भन्छ ६+२≠८
त्यो आफैं स्योर छैन, अनि म कसरी पास हुनु त ?
सुहागरातको भोलिपल्ट शेरेले आफ्नी बूढीसँग सोधेछ ।
शेरे : साँच्चै भन त आजसम्म तिमी कति जनासँग सुतेकी छ्यौ ?
बूढी : साँच्चै भन्नुपर्दा तपाइर्ंसँग मात्र सुतेको हो । अरूसँग त सारा रात जागै हुन्थें ।
बिरालोले बाटो काट्यो भने, स्पिड कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।
कम्पाउन्डमा काग करायो भने, चारो हाल्दिनुपर्छ ।
घरमा कुकुर रोयो भने, भेटेरिनरी लानुपर्छ ।
बारीमा स्याल करायो भने, ढोका बलियो थुन्नुपर्छ ।
दायाँ आँखा फर्फरायो भने, आँखा अस्पताल जानुपर्छ ।
बायाँ आँखा फर्फरायो भने, झन् छिटो जानुपर्छ ।
बाडुली लाग्यो भने, तातो पानी तन्काउनुपर्छ ।
घाँटी खसखसायो भने, 'कफ सिरप' दन्काउनुपर्छ ।
चुलोमा आगो भर्भरायो भने, ग्याँस सकिन सक्छ ।
डाडु-पन्यू चाट्यो भने माझ्न सजिलो हुन्छ ।
साँझ घर बढार्‍यो भने, बिहानलाई सजिलो हुन्छ ।
बच्चाले कुच्चो लगायो भने, मम्मीलाई हेल्प हुन्छ ।
नङ फुल्यो भने, पालिस किन्नुपर्छ ।
कपाल फुल्यो भने, हाइलाइट गर्नुपर्छ ।
लोग्नेमान्छे रोयो भने, मन हल्का हुन्छ ।
स्वास्नीमान्छे हाँस्यो भने, ऊ झन् हल्का हुन्छ ।
हात चिलायो भने, साबुन पानीले धोइहाल्नुपर्छ ।
रित्तो गाग्रो देखियो भने, खानेपानीमा फोन गरिदिनुपर्छ ।
दलितहरू मन्दिर पसे भने पुजारी ब्राह्मणको आम्दानी बढ्छ ।
पुजारीहरू दलितकहाँ बसे भने, चिया खर्च घट्छ ।
बाहुनले बंगुर खायो भने, बंगुरजस्तै मोटाउँछ ।
अन्धविश्वासको पछि लाग्यो भने, लंगुर जस्तै दुब्लाउँछ ।
शेरे पाङ्ग्रेसँग आफ्नो बुबाको सान दिँदै थियो ।
शेरे : मेरो बुबाको अगाडि ठूला-ठूला धनी मानिस पनि प्लेट थाप्छन् ।
पाङ्ग्रे : त्यसो भए त तेरो बुबा त धेरै धनी हुनुपर्छ, होइन के काम गर्नुहुन्छ तेरो बुबा ?
शेरे : पानीपुरी बेच्ने काम गर्नुहुन्छ ।
एक जना मानिस आफ्नो पर्स खेलाइरहेको थियो,
त्यही बेला अर्को एक जना आएर पेस्तोल देखाउँदै भन्यो ।
पहिलो व्यक्ति : ओ मिस्टर, त्यो पर्सले नत्र !
दोस्रो व्यक्ति : नत्र के ?
पहिलो व्यक्ति : नत्र यो पेस्तोलले ठोकिदिन्छु ।
दोस्रो व्यक्ति : होइन, लिनुस, हजुर ।
पहिलो व्यक्ति : हाहा मेरो पेस्तोलमा गोली नै छैन्, त्यसै डरायो ।
दोस्रो व्यक्ति : मेरो पर्समा पनि पैसा नै छैन ।
आमरूपमा केटाहरूले बोल्ने १० झूट
१. मलाई तिम्रो यादले एकदमै सताइरहन्छ ।
२. तिमी मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम रोजाइ हौ ।
३. फोन बिजी थियो त, के भयो हँ ?
४. घरबाट मम्मीको फोन आ'को होला, के गर्नु मम्मीको फोन काट्नुभएन !
५. तिम्रो र मेरो छुट्टै संसार हुनेछ ।
६. तिमी जुनी जुनी साथ दिन सक्छौ ?
७. मायामा सबै कुरा जायज हुन्छ लाटी ।
८. तिम्रो घरपरिवार पनि मेरै त हुन नि ।
९. तिमीभन्दा अरूसँग मेरो कतै कसैसँग सम्बन्ध छैन ।
१०. तिमी मेरी भइनौ भने जिन्दगीभर कुमार नै बस्छु ।
पीडाका बेला चरम आनन्द प्राप्त गर्ने कुरा हुँदैन।
आनन्द स्पा एन्ड नेचुरल थेरापी सेन्टर, ठमेल